ရိုနယျဒိုကို ယူနိုကျတတျဆီ ဆိုးလျရှားပွနျချေါလာနိုငျမလား? – Youth Bar
ရိုနယျဒိုကို ယူနိုကျတတျဆီ ဆိုးလျရှားပွနျချေါလာနိုငျမလား?
ဂြုဗငျတပျ ကနေ ထှကျခှာဖှယျရှိတယျလို့ သတငျးတှထှေကျနတေဲ့ စီရျောနယျဒိုနဲ့ အမွဲ အဆကျအသှယျရှိနဆေဲဖွဈတယျလို့ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားက ထုတျဖျောပွောဆိုခဲ့တယျလို့ The Athletic က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။‌
စီရျောနယျဒို နဲ့ ဂြုဗငျတပျအသငျး ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျဟာ လာမယျ့ရာသီအကုနျမှာ ကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈပွီး ကစားသမားရဲ့အနာဂတျဟာ လာမယျ့ရာသီ အသငျးရဲ့ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့အပျေါမှာ မူတညျနတောပါ။
ဂြုဗငျတပျအသငျးအနနေဲ့ လကျရှိဘောလုံးရာသီ စီးရီးအေ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ၅ နရောမှာ ရပျတညျနတောဖွဈပွီး အခုတဈပတျ ကစားမယျ့ စီးရီးအေ နောကျဆုံးပှဲစဉျပွီးရငျ ခနျြပီယံလိ၈ျ ဝငျခှငျ့ရမရ သိရတော့မှာလညျးဖွဈပါတယျ။
စီရျောနယျဒိုကို ချေါယူဖို့ အသငျးဟောငျး ယူနိုကျတကျ အပါအဝငျ ပီအကျဈဂြီနဲ့ ဥရောပ ကလပျအသငျးကွီးအခြို့က စိတျဝငျစားနကွေတာပါ။
အသငျးရဲ့ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနေ တိုးတကျလာခဲ့မယျဆိုရငျ စီရျောနယျဒိုကို ပွနျလညျချေါယူဖို့ တှနျ့ဆုတျမှာမဟုတျဘူးလို့လညျး ယူနိုကျတကျ အသငျးတာဝနျရှိသူတှကေ ဆိုထားပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျနဲ့ စာခြုပျကလညျး ကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈတာ‌ကွောငျ့ ကစားသမားရဲ့ပွောငျးရှကွေ့ေးဟာ နညျးပါးသှားဖို့ရှိနပွေီး စီရျောနယျဒိုရဲ့ ကွီးမားတဲ့ ပုံရိပျဆှဲဆောငျမှုကွောငျ့လညျး အသငျးရဲ့ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနဟော တကျလာနိုငျဖှယျရှိနပေါတယျ။
စီရျောနယျ‌ဒိုဟာ အသကျ၃၆နှဈ အရှယျရှိပွီဖွဈပမေယျ့ ဂိုးသှငျးနှုနျးကတော့ အခုအခြိနျထိ ကဆြငျးသှားခဲ့ခွငျးမရှိဘဲ ဒီရာသီ ကလပျနဲ့ နိုငျငံအသငျးအတှကျ ၅၂ပှဲ ပါဝငျကစားပွီး ၃၉ဂိုး သှငျးယူထားသလို စီရီးအေ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးသူဆုကိုလညျး ရရှိဖို့ရှိနပေါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျကနေ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ တဈယောကျတညျးသော ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားဆုရှငျဖွဈတဲ့ စီရျောနယျဒိုအပျေါ ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေလညျး သံယောစဉျ ကွီးမားနကွေဆဲပဲဖွဈပါတယျ။
ဂျုဗင်တပ် ကနေ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ အမြဲ အဆက်အသွယ်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ The Athletic က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။‌
စီရော်နယ်ဒို နဲ့ ဂျုဗင်တပ်အသင်း ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ဟာ လာမယ့်ရာသီအကုန်မှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး ကစားသမားရဲ့အနာဂတ်ဟာ လာမယ့်ရာသီ အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ။
ဂျုဗင်တပ်အသင်းအနေနဲ့ လက်ရှိဘောလုံးရာသီ စီးရီးအေ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၅ နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး အခုတစ်ပတ် ကစားမယ့် စီးရီးအေ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပြီးရင် ချန်ပီယံလိ၈် ဝင်ခွင့်ရမရ သိရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူဖို့ အသင်းဟောင်း ယူနိုက်တက် အပါအဝင် ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ဥရောပ ကလပ်အသင်းကြီးအချို့က စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ အသင်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် စီရော်နယ်ဒိုကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ တွန့်ဆုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ယူနိုက်တက် အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ဆိုထားပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်နဲ့ စာချုပ်ကလည်း ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တာ‌ကြောင့် ကစားသမားရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးဟာ နည်းပါးသွားဖို့ရှိနေပြီး စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ပုံရိပ်ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်လည်း အသင်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဟာ တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
စီရော်နယ်‌ဒိုဟာ အသက်၃၆နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ဂိုးသွင်းနှုန်းကတော့ အခုအချိန်ထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဒီရာသီ ကလပ်နဲ့ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ၅၂ပွဲ ပါဝင်ကစားပြီး ၃၉ဂိုး သွင်းယူထားသလို စီရီးအေ ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူဆုကိုလည်း ရရှိဖို့ရှိနေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ကနေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုအပေါ် ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကလည်း သံယောစဉ် ကြီးမားနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။